Nkụzi Devops na Gurgaon | Ihe ntinye na Devops na Gurgaon - ITS
Eziokwu |Isi Isi |Docker |Puppet Isi
Nchọpụta Ntanetị nke Ọhụrụ (ITS) bụ onye ndu ụwa nile n'inye IT na nkà mmụta nkà mmụta nkà na ụzụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ buru ibu na obere ụlọ ọrụ gburugburu ụwa. Ebumnuche nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ịnye ihe kachasị mma na mmemme ọzụzụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ nke ụfọdụ n'ime ndị ọkachamara mara mma na Ahịa. A na-ahọrọ onye ahịa maka MNC dị ka HP, EMC, HCL, Kronos, Colt, Nagarro na ọtụtụ ndị ọzọ maka ịnye ọzụzụ na ịhazi akụrụngwa maka mkpa ọzụzụ na mpaghara APAC / APJ. ANYỊ maara nke ọma maka ịmalite ụzọ dị iche iche na-enye ọzụzụ na ndị nkụzi anyị na-elekwasị anya mgbe niile maka mma ịhazi nnyefe ọzụzụ. ANYỊ mara na ọ bụ ụlọ ọrụ nkuzi kachasị mma maka ịhazi ihe gbasara ọzụzụ ma dịrị njikere mgbe niile iji zipu ọzụzụ n'akụkụ ọ bụla nke ụwa.
MụtaUsoro ihe omumena Gurgaon. Deba aha makaỌzụzụ ọzụzụ Devops na Gurgaonnaụlọ ọrụ ọzụzụ elu"Nchọpụta Ntanetị Ọhụrụ" wee nwetaNdenye akwụkwọ DevOps. Nweta nkọwa gbasara ụgwọ ụgwọ, usoro, oge, oge nhazi.
Ndị Kasị Mma n'Ụwa
Ejiri Na-agba ọsọ Ọmụmụ
Ịlaghachi na Asambodo Asambodo
Ụlọ Ọrụ Nlekọta Akaụntụ nke EC-Council
Nhọrọ nke ọnọdụ 9 Exotic
Nchọpụta Ntanetị ọhụrụ bụ ụlọ ọrụ nke na-enye ndị mmadụ n'otu n'otu, ụlọ ọrụ na kọleji na IT na nkà ọkachamara. E wezụga ọzụzụ ya ITS na-enwe ụlọ ọzụzụ dị na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ niile nke India maka mkpa ọzụzụ ụlọọrụ.
Ị nụla banyere uru ọzụzụ nkuzi Devops bara.Mechie nkà na ụzụ IT gị dịka ụzọ kachasị mma ị mụtara ma mụta ụzọ nke gị, n'ebe ị nọ.